Raha Atao ‘Teny Faharoa’ Ofisialy Ao Jamaika Ny Teny Espaniola. Ahoana Ny Patoà? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2016 4:17 GMT
Fitenim-paritra sasany naseho tamim-pireharehana amin'ny fiara fitateram-bahoaka ao Jamaika. Sary avy amin'i Jason Gullifer, CC BY-NC 2.0 license.
Inona no tena “fiteny ofisialy” marina ao Jamaika? Manana fiteny roa ve izy? Tokony hahazo “fiteny faharoa” ve izy ary raha izany, tokony ho inona? Ireo no fanontaniana namatotra ireo mpaneho hevitra Jamaikana tao anatin'ny herinandro lasa, hatramin'ny Praiminisitra Andrew Holness aza nanamarika tao amin'ny Parlemanta fa te hahita ny Espaniola ho “teny faharoa” an'i Jamaika izy, miaraka amin'ny fampianarana teny Espaniola tsy maintsy atao any an-tsekoly.
Naneho ny heviny tamin'izy niverina avy amin'ny fivorian'ny Fikambanan'ny Firenena Karaiba (ACS) tao Kiobà ny praiminisitra, miresaka momba ny drafitra hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny fianarana ny teny miaraka amin'izany firenena izany (Kiobà). Ny fanamarihana nataony no nampitsoraka ny Jamaikana any amin'ny adihevitra mbola tsy voavaha ary indraindray nifampihenjanana mikasika ny fampiasana — sy ny fanekena — ny fiteny hafa Jamaikana manoloana ny teny anglisy. Mitohy amin'ny fanehoana taratra ny fizarazarana eo amin'ny fiarahamonina sy kolontsaina Jamaikana ny adihevitra, ary toy izany koa ny elanelana hita eo amin'ny rafi-pampianarana.
Raha miampita nosy Karaiba iray mankany amin'ny nosy hafa ianao, dia mety ho gaga amin'ny isan'ny fiteny ampiasain'ny faritra. Ny fiteny ofisialin'ny faritany Karaiba dia ny teny Anglisy, Espaniola, Holandey ary Frantsay, mampiseho ny lova navelan'ny fanjanahantany ao amin'ny faritra, ary ny Kiriolona Haisiana (fiteny ofisialin'i Haiti – miaraka amin'ny teny Frantsay – nanomboka tamin'ny 1987) sy ny Papiamento (izay nanjary fiteny ofisialy ao Aruba, Bonaire ary Curaçao tamin'ny 2003, miaraka amin'ny Holandey). Misy ihany koa ireo endrika maro amin'ny teny Kiriolona – anisan'izany ny fitenim-paritra Jamaikana / Patwa – sy ny teny toy ny Garifuna, fampiasan'ny vazimba teratany vitsy an'isa tao St. Vincent.
Noho izany, manana teny ofisialy roa ny faritany sasany, fa ny hafa kosa, tahaka an'i Jamaika angamba, manana teny ofisialy iray sy teny ofisialy amin'ny ampahany iray hafa. Ny adihevitra dia hoe efa antitra ve ny Patoà Jamaikana izay fiteny somary misaraka avy amin'ny teny anglisy, saingy tsy nahazo tosika haha-ofisialy azy ny tohan-kevitra tokony hanekena ho fiteny ofisialy ao Jamaika ny patoà. Na izany aza, maro no milaza fa tsy afaka (ary tsy hanao) fifandraisana amin'ny teny “Anglisy mahazatra” ny ankamaroan'ny Jamaikana – izay midika fa ny Patoà no teny voalohany ho an'ny maro amin'ny olom-pireneny, ary somary lavidavitra faharoa avy eo ny teny Anglisy. Misy toerana ho an'ny [teny] espaniola koa ve?
Maro tamin'ireo Jamaikana mpaneho hevitra – indrindra fa ireo ao amin'ny akademia – no tsy niombon-kevitra tamin'ny Praiminisitra momba ny teny Espaniola. Heverina ho toy ny firesahana voajanahary ho an'ny vahoaka Jamaikana ny patoà. Tompon-dakan'ny tenin-teratany ilay mpanoratra tantara tsangana, mpanao tononkalo sy olo-malaza ara-kolontsaina be mpankafy Louise Bennett-Coverley, nisintona azy hivoaka ny aloka taorian'ny fahaleovantena. Nanasongadina tao amin'ny taratasy ho an'ny Minisitry ny Fampianarana vaovao Ruel Reid tamin'ny fiandohan'ity taona ity i Hubert Devonish, mpampianatra Haiteny sy mpandrindra ny Vondron'ny teny Jamaikana ao amin'ny Oniversiten'i West Indies hoe:
Ho an'ny governemanta, ny fampahalalam-baovao, ary ireo manana ambaindainy ara-piarahamonina, ara-toekarena ary ara-politika, dia tsy mitranga ny olan'ny fitenin-dreny ‘tsy tahaka ireo firenena maizina ao Afrika sy Pasifika, ary isaorana Andriamanitra, miteny Anglisy isika eto Jamaika? ‘ Saingy, izany tokoa ve?
Izany hoe, tamin'ny fanadihadiana manerana ny firenena notarihan'ny Vondron'ny Teny Jamaikana tamin'ny 2006, ny 36 isanjaton'ny olona natao fanadihadiana dia nampiseho tsy fahaizana mamaritra zavatra tsotra andavanandro amin'ny fampiasana ny anglisy ambava. Mifanohitra amin'izany kosa, nahavita nanao izany tamin'ny fampiasàna fiteny Jamaikana ny 83 isanjato, 47 isan-jato kosa naneho ny fahaizany mampiasa ireo fiteny roa ireo.
Wayne Campbell, bilaogera sady mpampianatra nisioka hoe:
Tsy tokony hampihena ny satan'ny fiteny Patoà ny tolo-kevitry ny governemanta hampiditra ny teny Espaniola ho teny ofisialy faharoa ao Jamaika
Nanoratra ho fanohanana ny Patoà, tenim-bahoaka, ny mpanao matoandahatsoratra Louis Moyston :
Misy ny fomban-drazana mitsipaka kolontsaina Jamaikana sy ny vokatra amin'izany. Nisy ny fanilikilihana ny ska, rocksteady sy ny reggae tamin'ny fotoana nitsiriany noho izy fotsiny hoe ‘avy any ambany’. Taona vitsivitsy taty aoriana, mahahenika ny tontolo ny fankatoavana ho amin'ny endrika mozika maoderina; saingy mikasika ny teny Jamaikana kosa, misy ny tranga fandavana ny tena.
Olana iray lehibe miompana amin'ny heloka bevava sy ny fampandoroana dia mifototra ao amin'ny tsy fahombiazan'ny rafi-pampianarana. Ny ivon'ireo olana ireo dia milafika amin'ny olan'ny fiteny – fampianarana ny mpianatsika amin'ny fiheverana fa mpiteny Anglisy izy ireo. Heloka manitsakitsaka ny maha-olombelona izany fomba fanao izany. Tokony ampianarina ho toy ny teny faharoa ny teny Anglisy. Aoka isika hikarakara ny tokantranontsika alohan'ny hijerena any ivelany.
Na izany aza, sahiran-tsaina kokoa ireo Jamaikana maro mikasika ny tena tian'ny praiminisitra lazaina amin'ny “teny faharoa” – izany hoe, raha faritana, tsy ‘tenin-drazan'ny” mpiteny, saingy ampiasaina any amin'ny faritra onenan'izy ireo (toy ny faritra ao an-tanànan'i Miami, Etazonia ohatra, izay manana fiteny roa). Tsy mihatra amin'i Jamaika izany.
Mpanentana malaza amin'ny fanaovan-gazety Dionne Jackson Miller nilaza mivantana tao amin'ny pejy Facebook-ny hoe:
Oay izany porofom-pahadalàna. Ahoana no ahafahana manambara ny teny tsy hain'ny vahoaka ho teny faharoa?
Nosoritany tamin'ny filazana izao manaraka izao izany:
Izaho no ho voalohan-daharana hilaza fa tokony ho maila-piteny espaniola isika rehetra. Ao anatin'ny lisitrako izany! Rehefa izay no misy, na dia amin'ny ampahan'ny mponina aza, dia afaka miresaka momba ny fiteny ofisialy faharoa isika. Amin'izao fotoana izao, soso-kevitra mampihomehy izany.
Na izany aza, nampiseho tamin'ny “vox pop” haingana ny ankamaroan'ny lehilahy sy ny vehivavy teny an-dalana fa liana amin'ny fianarana ny teny espaniola, milaza ny maha ilaina azy.
Mampiseho taratra ny toetry ny rafi-panabeazana ao Jamaika ny ankamaroan'izany hevitra izany. Tsy ampianarina any an-tsekoly amin'izao fotoana izao ny patoà, ary ratsy amin'ny ankapobeny ny fahaizan'ny mpianatra Jamaikana ny teny Anglisy. Manome soso-kevitra fotsiny amin'ny hifantohana betsaka amin'ny fampianarana ny teny Espaniola any an-tsekoly ve ny Praiminisitra Holness? Tsy ampianarina any amin'ny sekolim-panjakana fanabeazana fototra ny Espaniola, fa ampianarina any amin'ny sekoly tsy miankina fanomanana – izay nahatonga an'i Wayne Campbell nisioka ny fivakisana eo amin'ny rafi-pianarana:
@Petchary Ny mpianatra rehetra ao amin'ny kilasy taona faha-7 izay nanatrika sekoly fanomanana dia afaka miteny Espaniola. Niantso azy ireo bebe kokoa ny mpampianatra.
@Petchary Misy ny filàna maika ho an'ny fiarahamonina Jamaikana mba hananana teny vahiny ofisialy noho ny tontolo manerantany iasantsika.
Ka maro ireo mihevitra, tahaka an'i Dawn Campbell Douglas fa tokony hifantoka amin'ny kalitaon'ny fampianarana teny anglisy aloha i Jamaika vao miditra amin'ny teny Espaniola:
Inona no tsy mety amintsika? Mila fanamboarana ny rafi-panabeazana eto amintsika … ankehitriny! Mampiseho ny vokatra isan-taona avy amin'ny [Mari-pahaizana Fanabeazana Faharoa Karaiba] fa manana olana amin'ny teny Anglisy izay teny ofisialintsika ireo mpianatra avy nahavita sekoly ambaratonga faharoa. Afaka milalao ambony rano isika rehefa feno ny fototra.
Stephen Gunter nisioka hoe:
@WayneCamo @Petchary ho an'ny ampahany lehibe ao amin'ny fiarahamonina Jamaikana, teny vahiny ny teny Anglisy.
Tokony hifikitra amin'ny fiteny patoà ankafizin'izy ireo, fiteny fanehoana ny kolontsain'izy ireo, ho fiten'izy ireo voalohany ve ny Jamaikana? Sa tokony hifantoka amin'ny fanatsarana ny fenitry ny fampianarana sy fianarana teny anglisy, no sady manamafy ny fampianarana ny teny Espaniola eny amin'ny sekoly fanabeazana fototra? Tokony hametraka fiteny ofisialy roa ve i Jamaika, tahaka an'i Haiti, Aruba, Bonaire ary Curaçao?
Nofintinin'ny UNESCO tamin'ny gazety politika nivoaka tamin'ny Febroary mitondra ny lohateny sahaza hoe “Raha tsy mazava aminao, ahoana no ahafahanao mianatra?”:
Tamin'ny tombatombana iray, marobe manakaiky ny 40% ny mponina manerantany no tsy afaka mianatra amin'ny teny fampiasan'izy ireo na azon'izy ireo.
Mihatra amin'i Jamaika izany sy any amin'ny firenena Karaiba hafa koa izay tsy ankatoavina tanteraka ny teny Kiriolona? Azo antoka kosa fa mbola hanohy ny adihevitra momba ny Patoà ny Jamaikana amin'ny fotoana manaraka .